DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeeray Tiyaatarka Qaranka oo dib u dhis ka socda | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeeray Tiyaatarka Qaranka oo dib u dhis...
DAAWO SAWIRRO: RW Kheyre oo kormeeray Tiyaatarka Qaranka oo dib u dhis ka socda
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa maantakormeer ku sameeyey Xarunta Tiyaatarka Qaranka, oo xilligaan dhismihiisa uu marayo meel Gabagabo ah.
Kormeerka ayaa Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehlinyey Xubno sar sare oo ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta, waxaana uu dhamaan soo marey qeybaha kala duwan ee Tiyaatarka oo uu dhismaha ka socdo.
Tiyaatarka Qaranka ayaa waxaa lagu dhisayaa Barnaamijka Isxilqaan ee Madaxweyne Farmaajo mar hore uu iclaamiyay.
Kheyre ayaa kul dardaarmey Shaqaalaha iyo Madaxda Xarunta Tiyaatarka inay si wanaagsan loo dhameystiro dhismaha,isla markaana uu noqdo goob Bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo.
dib u dhis ku socda
Kheyre oo kormeeray
tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed